Caawa & Daljir iyo Axmed Shiikh Maxamed “Tallman” Daljir Bossaso (dhegayso) – Radio Daljir
Caawa & Daljir iyo Axmed Shiikh Maxamed “Tallman” Daljir Bossaso (dhegayso)
Agoosto 1, 2018 8:47 g 0
Kulanti wanaagsan, kuna soo dhowaada barnaamijkii cawaysnimo ee Caawa & Daljir. Barnaamijku waxa uu caawa idin kaga imaanayaa xarunta Daljir Bossaaso, waxaana idiin soojeedinaya Axmed Sheekh Maxamed (Tallman).
Hoos ka dhegayso Barnaamijka.
CAAWA & DALJIR 1016 Wararka 17281
Muuqaalka Bulshada ee Radio Daljir: Qiimaha Waxbarashada iyo duruufaha dhaqaale ee Puntland (dhegayso)
on Xafiiska difaacaha xuquuqul Insaanka ee Puntland oo Daljir gudoonsiiyay sahaado Sharaf (Sawiro)WAZAARADDA NAASLEYDA EE P/LAND..KKKKLKK. DUMAR WAA LABA KELMADOOD OOLAYSKU QABTAY OO KALA AH:DU-MAR....(DU & MAR=DUMAR)...